International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: Burma News International::30 May 2008
Burma News International::30 May 2008
BURMA NEWS INTERNAIONAL
Farmers despair as season for cultivation begins
Farmers in the Irrawaddy delta said lives have been turned upside down by the killer Cyclone Nargis and they are ataloss to figure out where to pick up the thread and go back to cultivation.
Private donors given free access to cyclone victims
Chiang Mai – Private donors were allowed free access to cyclone victims by the Burmese military junta on Wednesday, according toadonor who madeavisit.
The junta mounts fresh pressure on KIO
The Burmese military junta has begun to arm twist afresh the Kachin Independence Organization (KIO) by blocking all entry and exit points for traders, passengers and cars to KIO's key business centre on the Sino-Burma border in Northern Burma, sources close to KIO said.
Burmese military southeast command watches US warship
The Southeast Command based in Moulmein (Mawlamyine) the capital of Mon State has been keepingaclose watch onaUS warship which is waiting off the coast of Burma with relief supplies for cyclone refugees. The command has also posted soldiers on the costal villages along the bay in the state.
Widespread Malaria in Mon state
Malaria remains widespread in Mon state. The World Health Organization is concerned about diarrhea, malaria and dengue after Cyclone Nargis hit Burma 's commercial city Rangoon and Irrawaddy delta affecting over 2.4 million people.
Delay in payment delay upsets Burmese traders in Mizoram
Burmese traders who supplied goods to markets in Mizoram state, northeast India from Burma are in dire straits because of delay in payments by local retailers in Mizoram.
ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများရပိုင်ခွင့် အယူခံ ဗဟိုတရားရုံးသို့ တင်သွင်း
Thursday, 29 May 2008 23:30
မသန်းမစွမ်းအလုပ်သမား နစ်နာကြေးအတွက် ထိုင်းအစိုးရထံမှ ရရှိနိုင်ရန် ရွေ့ပြောင်း မြန်မာအလုပ်သမား သုံးဦး က ချင်းမိုင် ဗဟိုတရားရုံးငြင်းဆိုချက်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် ဘန်ကောက် ဗဟိုတရားရုံးသို့ ယမန်နေ့က အယူ ခံလွှာ လျှောက်တင်ခဲ့သည်။
Thursday, 29 May 2008 23:23
ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး ဧရာဝတီတိုင်းသို့ မနက်ဖြန် ခရီးလှည့်လည်ဖွယ်ရ
Thursday, 29 May 2008 23:10
ချင်းမိုင်။ ။ စစ်အစိုးရ ဒုတိယအကြီးအကဲ ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးသည် သောကြာနေ့တွင် ဧရာဝတီတိုင်းတွင်းရှိ နာဂစ် မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ဒေသများသို့ လှည့်လည်ကြည့်ရှုမည် ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ သတင်းရပ်ကွက်တခုက ပြောသည်။
ကန့်ကွက်မဲပေးရန် တိုက်တွန်းသည့် ပိုစတာနှင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ နှစ်ဦး ပျောက်ဆုံးနေ
Thursday, 29 May 2008 22:54
နအဖ စစ်အစိုးရမှ တဘက်သတ်ကျင်းပသည့် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံကို ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲတွင် ကန့်ကွက်မဲပေးရန် တိုက်တွန်းသည့် ပိုစတာဖြင့် ဖမ်းဆီး ခံရသူနှစ်ဦးမှာ ယခုအခါ ပျောက်ဆုံး နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Thursday, 29 May 2008 22:49
အလှူရှင်များ လွတ်လပ်စွာ လှူဒါန်းခွင့်ရဟု ပြောဆို
Written by ဝိုင်းပီး
Thursday, 29 May 2008 22:16
နယူးဒေလီ။ ။ ဧရာဝတီတိုင်းရှိ လေဘေးဒုက္ခသည်များထံ ယမန်နေ့က လွတ်လပ်စွာ တိုက်ရိုက် လှူဒါန်းခွင့် ပြုလိုက်ပြီဟု ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ခဲ့သူ တဦးက ပြောဆိုသည်။